युगसम्बाद साप्ताहिक - स्वच्छ वातावरण र यज्ञको सम्बन्ध
Friday, 02.21.2020, 11:15am (GMT+5.5) Home Contact
Thursday, 01.25.2018, 12:35pm (GMT+5.5)
हामी प्रत्येकले घरमा कुनै शुभकार्य गर्दा हवन गर्नेगर्दछौं । जानेर–बुझेर वा परम्परा निर्वाहकै लागि भए पनि यसरी गरिएको हवन (यज्ञ)ले वातावरणलाई कति लाभ पु¥याउँछ भन्ने हामीमध्ये थोरैलाई मात्र थाहा छ । वैदिक संस्कृतिमा यज्ञ उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसको एउटै कारण हो सृष्टि संरचनाका यावत जीव, वनस्पतिको रक्षा । कारण उनीहरुका लागि चाहिने शुद्ध हावापानी र खाद्यान्न । त्यसकारण भन्न सकिन्छ यज्ञ गर्नु फगत आगोमा अन्न हु¥याउनु मात्र हैन । यो वातावरण सुद्ध गर्ने सबभन्दा वैज्ञानिक वैदिक विधि हो । यज्ञमा होमिने चरुबाट निस्कने धुँवा नै वातावरण शुद्ध राख्ने सबभन्दा उपयुक्त पदार्थ हो । यज्ञकुण्डमा हालिएको पदार्थ सूक्ष्म भएर फैलिंदै हावाका माध्यमबाट टाढाटाढासम्म पुग्दछ र सुगन्ध फैलाउँछ । जल, जमिन, वनस्पति, सबै शुद्ध हुन्छन् । यसले दीर्घजीवन प्राप्त हुन्छ । खाद्यान्नदेखि सबै अत्यावश्यक वस्तु प्राकृतिक हुन्छन् । तर, आज यी सबको साटो कृतिमताले जरा गाडेको छ । अहिले मानिसलाई प्राकृतिक रुपमा स्वस्थ रहने वैदिक विधिबिरुद्ध उक्साएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विषवमन गरे, पैसा खुवाएर उक्साए । आफ्ना औषधि, हाइब्रिड खाद्य वस्तुका बीज र रासायनिक पदार्थ विक्रीको बजार विस्तार गरे । हाम्रा कथित क्रान्तिकारीहरु त्यसैको सिको गरेर आफ्नो मौलिकता नष्ट गर्न उद्यत रहे । उनीहरुले के बुझ्न सकेनन् भने अग्निमा होमिएको पदार्थ केवल खाद्यान्न मात्र हैन । त्यो औषधि हो ।
वैदिक शास्त्रमा संसारमा सबभन्दा ठूलो कर्म नै यज्ञकर्म भनिएको छ । यज्ञको कर्मथलो नेपालमा भने यसबिरुद्ध कुप्रचार छ । तर, नेपालीलाई वैदिक धर्म, संस्कृतिबिरुद्ध भड्काउने पश्चिमा मुलुकहरु संस्कृत विद्यालय बढ्दैछन् । वेद–वेदाङ्गको अध्ययन गराउँदैछन् अनि यज्ञ–यगादि गर्ने बिधि सिकाउँदैछ । यज्ञसंस्कृतिको उद्गम थलो नेपालमा कथित क्रान्तिकारी भनिनेहरुले त्यसको बिरोध गरे । आगोमा अन्न पोल्नुको साटो गरीबलाई दिए पेट भरिन्थ्यो भन्दै संस्कृतका पुस्तकमा आगो झोसे । कालान्तरमा सत्ताको निकट पुगे अनि तिनीहरु नै महायज्ञमा दुबोको मालाले सजिएर अतिथि बन्न पुगे र भाषण गरे “हिन्दु धर्म संस्कृति वैज्ञानिक छ ।” यदि त्यस्तो थियो भने किन संस्कृतका पुस्तक जलाइए ? किन संस्कृति विद्यालय–विश्वविद्यालयमा आगो झोसियो ?
निरन्तर यज्ञ–यगादि विभिन्न स्थानमा भैरहने हो भने तापक्रम वृद्धि, वातावरण प्रदूषण, नदी प्रदूषण क्रमशः हटाउँदै जान सकिन्छ । तर, नेपालमा यज्ञ–यगादिलाई कर्मकाण्डी र बाहुनको खाने मेसोका रुपमा गलत व्याख्या र प्रचार गरियो । अहिले तापक्रम बढेको छ– हिमालदेखि तराईसम्म । वितेको केही वर्षयता तराईमा भन्दा हिमालमा तापक्रम बढेको तथ्यांक छ । यसले नेपालका हिमालयहरु कतिबेला काला पहाडमा परिणत हुने हुन् केही भन्न सकिन्न । विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल सबभन्दा प्रभावित मुलुकको सूचीमा छ । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम बढिरहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारणमा पानी नपर्नु, हिउ घट्नु र तापक्रम बढ्दै गएकाले हो । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको जलस्रोत, खानेपानी, खाद्य उत्पादन लगायत जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ ।
विश्व जलवायु परिवर्तनले संसारभर नै खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने चेतावनी विश्व खाद्य संगठनले दिइसकेको छ । अर्कोतिर भोकमरीमा पर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्ने भविष्यवाणी भैसकेको छ । विश्वमा ७० दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न संचिती भएन भने त्यसलाई संकटकालका रुपमा हेरिन्छ । अहिले विश्वमा ७० दिनलाई पुग्ने खाद्य सञ्चित छैन । खेतीपातीको मौसममा पानी नपर्दा खाद्य उत्पादनमा व्यापक कटौती हुन थालेको छ । हिमालका हिउँ पग्लदै जाँदा हिमनदीहरूको संख्या बढ्न थालेका छन् । यसले चाहिने बेलामा पानीको अभाव हुने र नचाहिने बेलामा नदीहरूको सतह बढ्ने खतरा पनि औंल्याउन थालिएको छ ।
चौतर्फी प्रदूषणले अनेकथरि रोगव्याधी देखापरेका छन् । शुद्ध र स्वच्छ हुनुपर्ने हिमाल र सागर समेत प्रदूषित भएर त्यहाँका बहुमूल्य जडिबुटी र जलचरहरू लोप हुन थालेका छन् । प्राकृतिक सन्तुलनका लागि अत्यावश्यक पक्षहरू लोप हुँदैजादा मानव जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्नसक्छ । अहिले नेपालको जल, थल र वायुमा फैलिएको प्रदूषणले अनेक समस्याहरू उत्पन्न गरिरहेका छन् । राजधानी काठमाडौंको हालतको के बयान गर्नु ? वातावरण शुद्ध राख्ने परम्परागत पद्धति र पिता पुर्खाले उत्तराधिकारमा छाडेर गएका विधिहरूको हामीले अनुसरण नगर्दा नै हाम्रो वातावरण हाम्रै लागि अनुपयुक्त बन्दैछ । पानीका स्रोत सुक्दैछन्, नदी प्रदूषित बन्दैछ । हिमालमाथि बढी व्यापारीकरण गरिंदा हिमालमै टनका टन फोहरको थुप्रो लागेको छ । हरेक वर्ष सगरमाथाबाट ओसारिने फोहरको राशीले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ । स्वच्छ हुनुपर्ने हिमाल यसरी प्रदूषित हुनु दुर्भाग्यको सूचक हो ।
पुराना कुरा सवै खराब र नयाँ जति सवै राम्रा हुन्छन् भन्ने होइन । नेपालको मौलिक पहिचानको हामीले ख्याल गर्न सक्यौं भने र यसको रक्षा गर्ने जमर्को ग¥यौं भने हामी विश्वमा नमूना राष्ट्रको रुपमा उभिने छौं । वातावरण शुद्ध राख्ने यज्ञ–यगादि गर्नुको साटो टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गर्न थाल्यौं भने हाम्रो मन्दिर, मस्जिद, नदी, पहाड, हिमाल सवै ध्वस्त हुने दिन धेरै टाढा छैन । तर यसको विपरीत हामी प्रत्येक गाउँमा यज्ञस्थल निर्माण गर्ने र वातावरणलाई सुगन्धित पार्ने हवन आदि कार्य गर्ने अभियान नै चलाइनु पर्दछ ।
विश्वका धनी मुलुकहरूले अहिले यज्ञ विधिको सिको गर्दै प्रत्येक मानिसलाई केही समय मात्र भए पनि यज्ञ गर्न आव्हान गरेका छन् । कतिपय अरबी मुलुकमा रुख अगाडि पुगेर स्वचालित यज्ञयन्त्रमा चरु होमेर यज्ञ गर्ने चलन बसालिएको समेत सुन्नमा आएको छ । तर यज्ञ–यज्ञादिको उद्गमस्थल मानिएको नेपालमा यसलाई बाहुनको ठगी खाने पेशाको रुपमा दुत्कारिएको छ । विश्वले ज्ञान–विज्ञानदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत हाम्रा मौलिक शिक्षा पद्धतिको सिको गरेर आफू सुरक्षित र ढुक्क हुनथालेका छन् भने हामी भने हाम्रै सम्पत्तिमाथि आगो लगाइरहेका छौं । हाम्रो विडम्वना नै यही हो ।